Ngaba 'ugweba' okanye 'uyabona' uhlobo lomntu? - Ingqondo
Ngaba uyiNdawo 'yoMgwebi' okanye 'oQondayo' yoBuntu?
Olona vavanyo luqhelekileyo lweMmy-Briggs lovavanyo lukwahlula abantu kumxube oxandileyo weentlobo zobuntu. Kwisithuba esidlulileyo, sixoxe Umahluko phakathi kokuziva kunye nokuqonda . Ngeli xesha, sinenjongo yokujongana nenye yee-dichotomies (ngaphandle kwe-4): ukugweba kwaye ukuqonda. Ukwazi apho ungena khona phakathi kwezi ntlobo zimbini zobuntu kunokukunika umbono wokuba usebenza kwaye unxibelelana njani nehlabathi langaphandle.
La magama mabini azisa engqondweni iingcinga ezithile ezizezinye - ukugweba kuthathwa njengokuthetha 'ukugweba,' kwaye ukuqonda kucingelwa ukuba kuthetha 'ukuqonda,' kodwa, njengoko siza kubona, ezi zikude neengcaciso zokwenyani zikaMyers-Briggs.
Ezi ndidi zimbini zihlala zididekile kwaye zingaqondwa kakuhle. Zithetha ntoni ngokwenene, kwaye ngaba enye ingcono kunomnye?
Ukuba ufumene amanqaku aphezulu, okanye uncike ekubeni ngumntu 'ogwebayo', ungaze woyike oko akuthethi ukuba uyinto embi, egwebayo. Ayithethi ukuba uyabanda okanye uyabala nokuba.
Abantu abanobuntu bokugweba bathanda ukuba nocwangco, bafune ukuvalwa, bacwangciswe, bacwangcise, babe noxanduva, benze isigqibo, balawulwe, bajolise kwimisebenzi, kunye nolwakhiwo olufanayo. Aba bantu bahlala befumaneka kwezi ndima zilandelayo: umveleli, umxhasi, inkosi, umvavanyi, umcebisi, umkhuseli kunye neqhinga.
Njengoko ubona, akukho nto imbi apha-ayigwebi, bakhetha ukusebenza ngaphakathi kuseto oluhle ngakumbi xa kuziwa kunxibelelwano lwangaphandle.
Bacacisa ngokucacileyo iimfuno kunye neemfuno zabo, kwaye bathanda ukuba imicimbi ixazululwe ngaphambi kokuba baqhubeke. Ayingabo abacocekileyo, abacocekileyo, abanemithambo-luvo, abaphosisi bamaqela abaphakamisayo abantu abaninzi bakholelwa ukuba banjalo. Ngelixa benokuya kwinqanaba lokuziqeqesha ngakumbi, kunye nenxalenye yokuqina kobuntu, oko akuthethi ukuba zirobhothi ezimbi, ezingqongqo, ezikude.
izinto ekufuneka uzenzile ukuba uyadika
Umntu olungelelanisiweyo, ozimeleyo, onoxanduva othanda ukucaciswa, uyintsikelelo kwiqela lakho emsebenzini kwaye xa kufikwa kubudlelwane bobuqu, uya kuhlala uyazi ukuba umi phi nabo. Akubi kubi ngoku, akunjalo?
Kwelinye icala, ukuba ufumene amanqaku aphezulu kwisiphelo sokuqonda sovavanyo lwe-Myers-Briggs, oku akuthethi ukuba uluhlobo oluthile lwe-flake-washy, engena cala, okanye ukuba uyi-slob engalungelelananga.
Abantu ababonisa ngakumbi ubuntu obuqondayo bafumana ulwakhiwo, njengokugcina ukhetho lwabo luvulekile, kunye nexabiso lokuguquguquka. Benza izigqibo, kodwa kuphela emva kokulinganisa onke amathuba, kwaye besenza njalo xa kunyanzelekile. Ziyakwazi ukuziqhelanisa, zikhululekile, zingenaxhala, azithandi izinto eziqhelekileyo, ukonwabele ukuzenzekela , kwaye sithanda ukungenisa ulwazi.
Bahlala befumaneka kwezi ndima zilandelayo: umcengezi, ukonwabisa, umzobi, umsunguli, ingcibi, igqwetha, injineli nomphuphi, ukubala nje abambalwa.
Olu hlobo lobuntu alunanto yakwenza nezakhono zakho zokujonga, oko kukuthi, indlela 'olibona ngayo' ilizwe elikungqongileyo njengokuthanda ukugweba, inento yokwenza nendlela okhetha ukunxibelelana ngayo nehlabathi. Kwakhona, ayisiyondawo 'imbi' okanye 'intle'. Abaqapheli akuyomfuneko ukuba 'bahle' okanye kungenjalo, 'bangumthunywa,' bakhetha nje ukugcina ulawulo ngokuba neendlela ezingakumbi ezikhoyo kubo.
Umntu olunyamezelayo utshintsho kunye neyantlukwano, ukulungelelanisa izinto, kunye nokuzenzekelayo, naye unokwenza ilungu leqela elifanelekileyo lomsebenzi. Kubudlelwane bobuqu, baya kuba yimithombo emikhulu yeembono ezintsha, kwaye kube lula ukujongana nabo kuba bathambekele ekubeni bhetyebhetye kwaye baqhele ngokukhawuleza kutshintsho lwequbuliso. Ubomi abuzukukruqula ngombono ngeenxa zonke.
Ngaba uyiNdawo yoBuntu 'oCingayo' okanye 'oziva'?
Iimpawu ezili-10 zokuCinga nzulu
Iimpawu ezi-5 'eziNgekhoyo' zoBuntu eziNene zinesilivere
Izakhono ezi-5 zoNxibelelwano eziBalulekileyo kuMsebenzi wakho, ubudlelwane kunye nobomi
Iimpawu ezi-10 zemiphefumlo emidala ezenza ukuba zihluke ngokupheleleyo kwaye zintle
Ukulinganisa indawo yangaphakathi yangaphakathi yokulawula: Ukufumana indawo emnandi
Kuthekani Ukuba NdinguBabini?
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba akukho nanye kula macandelo ayingqinisiso. Unokwazi ukugweba nokuqonda. Ukuba ngaphezulu kwesinye akukuthinteli ekubeni ungomnye. Akunyanzelekanga ukuba zichasane. Unokudibanisa ukugweba kunye nokuqonda ukuba ibhalansi ilungele wena.
izinto ezimnandi zokwenza endlwini yakho xa ukruqukile
Unokuba ngu-50/50, 20/80, 30/70. Akukho mntu ungatshatanga ongenazo zonke izakhono zokugweba, okanye akanazo zonke izakhono zokubona sinazo ngokwamanani ahlukeneyo, uninzi lwethu luxhomekeke kakhulu komnye okanye komnye.
Umzekelo, ndithathe uhlobo olucwangcisiweyo lovavanyo lweMyers-Briggs ndinomdla wokubona ukuba ndiza kufika phi, kwaye yabonisa ukuba ndigweba ama-52% kwaye ama-48% ayaqonda-phantse ama-50/50. Kulapha kanye kanye apho ndaziva ndiza kubakho, kwaye ndiyayibona ibonakaliswa kwiindawo apho ndikhetha khona ulwakhiwo, kunye neendawo apho ndikhetha khona ukuba bhetyebhetye ebomini bam.
Ukugweba : Ndiyayithanda kwaye ndifuna ulwakhiwo ngenxa yomsebenzi endiwenzayo, okt, ndisebenza ngokuzimeleyo kwaye lifuna ukuzibamba. Ndiyakonwabela nokusebenzela ukufikelela kwiinjongo ezibonakalayo, kwaye ndiyindlovukazi yoluhlu lwezinto eziza kwenziwa. Yonke into ibhaliwe phantsi kwaye itshekishiwe, kwaye ndiyathanda ukwazi ukuba umsebenzi uzinzile ngaphambi kokujongana nolandelayo.
Ukuqonda Ndiphila ngokuzimela kuba ndiyalicekisa ulwakhiwo lweofisi ngokusesikweni imeko yendalo yesi-9-5 ayikaze ibe yeyam, ndiyifumanisa iyothusa. Ndikhetha ukwenza iiyure zam, ndichaze iiparameter zomsebenzi wam, ndigcine ukhetho lwam luvulekile kuwo nawuphi na umsebenzi oza kum, kwaye ndifunde izinto ezintsha.
Usebenzisa njani Iziphumo zakho
Ngaba ndiziva ndahlulwe okanye ndibhidekile ziziphumo zam? Ngokuchasene noko, ndicinga ukuba ukudityaniswa kwezi zibini kunengqiqo efanelekileyo kwindlela endihamba ngayo kwihlabathi. Kwimicimbi yam yemihla ngemihla, ndihlala ndincike kancinci ekugwebeni, kodwa njengoko ubona, oko akuthethi ukuba andinakuba ngumbonisi ngokunjalo.
Ngelixa iziphumo zakho ziza kukuxelela ukuba ungubani, kwaye usebenza njani ngaphandle, akufuneki bathathwe ngokuba 'balungile' okanye 'babi,' 'balungile' okanye 'baphosakele.' Iziphumo zikhethekile nguwe, kufuneka zisetyenziswe njenge Isikhokelo, hayi imantra.
Iziphumo ze-Myers-Briggs zihlala zisetyenziswa kuvavanyo lwasemsebenzini kuba ezi ntlobo zobuntu zinika abantu abasebenza nawe ukuqonda indlela ocinga ngayo, oziva ngayo, kwaye osebenza ngayo. Baxelela abanye abantu ukuba ukhetha ukujongana njani neemeko, kunye nendlela othanda ukuphathwa ngayo.
Umcimbi kuphela kolu vavanyo kukuba ubeka emngciphekweni weziphumo ezisetyenziselwa iinkcazo ezingaguqukiyo ezingavumeli ukwahluka okanye ukungafani. Kuza kuhlala kukho ukungabikho komthetho kuba abantu zizidalwa ezinoburharha kwaye zinzima ezingafakwanga lula kumacandelo.
Khawukhumbule nje, akukho mntu uphakame apha, enye ayingcono kunomnye, yiba ngumgwebi, okanye umbonisi ziindlela nje ezahlukeneyo zokuhamba ebomini kunye nokuhlangabezana nemiceli mngeni.
izinto ezimnandi zokwenza ukuba uyadika
ungazi njani ukuba oyena mhlobo wakho ububuxoki
Izinto ezimnandi zokwenza nomhlobo omnye
ukuthandana nomntu ongazange athandane ngaphambili
zenziwa njani iintsuku zihambe ngokukhawuleza